အာဆင်နယ်-မန်စီးတီး ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်များ
အာဆင်နယ်-မန်စီးတီးပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်များ
12 Aug 2018 . 5:10 PM
လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်းကတော့ ချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအဖြစ် အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ ပွဲဦးထွက် ကစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီမှာ ပြင်ဆင်မှုကြီးကြီးမားမား မလုပ်ထားပေမယ့် ဂွါဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးအသင်းဟာ တောင့်တင်းနေဆဲဖြစ်ပြီး အရံကစားသမားတွေကအစ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိနေတာကြောင့် First Line Up (၁၁)ဦးနဲ့ ဘာမှ ကွာခြားမှုမရှိဘူး။ (၂၂)နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် နည်းပြအပြောင်းအလဲ လုပ်ထားတဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် နည်းပြသစ် အူနိုင်းအမ်မရီ Unai Emery လက်ထက်မှာ ဘယ်လောက်အထိ ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ အသင်းရဲ့ နေရာအလိုက်မှာ ကစားသမားသစ်တွေ ခေါ်ယူအားဖြည့်ထားတာကြောင့် ဒီရာသီမှာ အာဆင်နယ်အသင်းက တစ်ကျော့ပြန် အောင်မြင်မှုမှုတွေ ရယူဖို့ အသင့်ရှိနေပြီလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ အာဆင်နယ်နဲ့ မန်စီးတီးပွဲမတိုင်ခင် ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်တွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တုန်းက အာဆင်နယ်အသင်း လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်မှာ အသေးစား ခြေသလုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ ကွင်းလယ်လူ ရမ်ဆေး Ramsey ဒီပွဲမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့ အခြေအနေကောင်းနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုလာရှီနက် Kolasinac (ဒူး)၊ ကိုစီယဲလ်နီ Koscielny (ခြေဖနောင့်ကျော) တို့ကတော့ မန်စီးတီးနဲ့ပွဲကို လွဲချော်မှာပါ။ ကစားသမားသစ်တွေဖြစ်တဲ့ လေနို Leno ၊ လစ်ခ်ျစတိုင်နာ Lichtsteiner ၊ ဆိုကရေတစ် Sokratis တို့ဟာ အာဆင်နယ်ကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲကို ဆင်နွှဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးနောက်ခံလူ ဒန်နီလို Danilo ဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားတုန်းက ရရှိခဲ့တဲ့ ခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့် လွဲချော်ဖို့များနေပြီး ဒေးဗစ်ဆေးလ်ဗား David Silva ကလည်း ဒဏ်ရာရှိနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ စတာလင် Sterling ၊ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne တို့ကတော့ ဒီပွဲမှာ အင်ပြည့်အားပြည့် ပါဝင်ကစားနိုင်မှာပါ။
-အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် လက်ရှိချန်ပီယံနဲ့ အဖွင့်ပွဲကစားရတာက ၁၉၇၀-၇၁ ရာသီနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၀-၇၁ ရာသီက အဲဗာတန်နဲ့ကစားခဲ့ရပြီး (၂)ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တယ်။
-မန်စီးတီးအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအဖွင့် နောက်ဆုံး(၉)ပွဲမှာ ရှုံးပွဲလုံးဝမရှိဘဲ (၈)ပွဲနိုင်၊ (၁)ပွဲသရေကျခဲ့ပြီး အဲဒီ(၉)ပွဲမှာ (၇)ပွဲဆက် သရေကျခဲ့တယ်။
-အာဆင်နယ်အသင်းဟာ မန်စီးတီးနဲ့ နောက်ဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်(၅)ပွဲမှာ နိုင်ပွဲမရှိဘဲ (၂)ပွဲသရေ၊ (၃)ပွဲ ရှုံးခဲ့သလို နောက်ဆုံး(၁၂)ပွဲမှာလည်း (၂)ပွဲသာ အနိုင်ရခဲ့တယ်။
-အီမရိတ်စ်ကွင်း နောက်ဆုံးလိဂ်(၆)ပွဲမှာလည်း (၁)ပွဲသာနိုင်ခဲ့ပြီး (၂)ပွဲသရေ၊ (၃)ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။
-ပရီးမီးယားလိဂ်လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းတွေ ပြီးခဲ့တဲ့ (၂)ရာသီဆက် ရာသီအဖွင့်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ လက်ရှိချန်ပီယံအသင်း အဖွင့်ပွဲ (၃)ရာသီဆက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာ တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ဘူး။
-အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွင့်ပွဲကို အိမ်ကွင်း (၇)ရာသီဆက် ကစားခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့(၆)ပွဲမှာ (၂)ပွဲနိုင်၊ (၁)ပွဲသရေ၊ (၃)ပွဲရှုံးခဲ့တယ်။
-အာဆင်နယ်အသင်းဟာ တနင်္ဂနွေနေ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေမှာ အနီကတ်(၆)ကြိမ်အထိ ပြသခံခဲ့ရပြီး အများဆုံးဖြစ်နေတယ်။
-ဂွါဒီယိုလာနဲ့ အူနိုင်းအမ်မရီတို့ဟာ စပိန်မြေမှာ စုစုပေါင်း(၁၀)ပွဲဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ဂွါဒီယိုလာက တစ်ပွဲမှ မရှုံးဘဲ (၆)ပွဲနိုင် (၄)ပွဲသရေကျခဲ့တယ်။
အာဆငျနယျ-မနျစီးတီးပှဲနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားခကျြမြား
လကျရှိခနျြပီယံ မနျစီးတီးအသငျးကတော့ ခနျြပီယံကာကှယျပှဲအဖွဈ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ ပှဲဦးထှကျ ကစားရတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ဒီရာသီမှာ ပွငျဆငျမှုကွီးကွီးမားမား မလုပျထားပမေယျ့ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ မနျစီးတီးအသငျးဟာ တောငျ့တငျးနဆေဲဖွဈပွီး အရံကစားသမားတှကေအစ ထိပျတနျးအဆငျ့ရှိနတောကွောငျ့ First Line Up (၁၁)ဦးနဲ့ ဘာမှ ကှာခွားမှုမရှိဘူး။ (၂၂)နှဈအတှငျး ပထမဆုံးအကွိမျ နညျးပွအပွောငျးအလဲ လုပျထားတဲ့ အာဆငျနယျအသငျးအတှကျ နညျးပွသဈ အူနိုငျးအမျမရီ Unai Emery လကျထကျမှာ ဘယျလောကျအထိ ပွောငျးလဲသှားမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။ အသငျးရဲ့ နရောအလိုကျမှာ ကစားသမားသဈတှေ ချေါယူအားဖွညျ့ထားတာကွောငျ့ ဒီရာသီမှာ အာဆငျနယျအသငျးက တဈကြော့ပွနျ အောငျမွငျမှုမှုတှေ ရယူဖို့ အသငျ့ရှိနပွေီလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။ အာဆငျနယျနဲ့ မနျစီးတီးပှဲမတိုငျခငျ ဒီပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားခကျြတှကေို ပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျတုနျးက အာဆငျနယျအသငျး လကေ့ငျြ့ခနျးအစီအစဉျမှာ အသေးစား ခွသေလုံးဒဏျရာရရှိခဲ့တဲ့ ကှငျးလယျလူ ရမျဆေး Ramsey ဒီပှဲမှာ ပါဝငျနိုငျဖို့ အခွအေနကေောငျးနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုလာရှီနကျ Kolasinac (ဒူး)၊ ကိုစီယဲလျနီ Koscielny (ခွဖေနောငျ့ကြော) တို့ကတော့ မနျစီးတီးနဲ့ပှဲကို လှဲခြျောမှာပါ။ ကစားသမားသဈတှဖွေဈတဲ့ လနေို Leno ၊ လဈချြစတိုငျနာ Lichtsteiner ၊ ဆိုကရတေဈ Sokratis တို့ဟာ အာဆငျနယျကစားသမားဘ၀ ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂျပှဲကို ဆငျနှဲကွမှာဖွဈပါတယျ။ မနျစီးတီးနောကျခံလူ ဒနျနီလို Danilo ဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားတုနျးက ရရှိခဲ့တဲ့ ခွခေငျြးဝတျဒဏျရာကွောငျ့ လှဲခြျောဖို့မြားနပွေီး ဒေးဗဈဆေးလျဗား David Silva ကလညျး ဒဏျရာရှိနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ စတာလငျ Sterling ၊ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne တို့ကတော့ ဒီပှဲမှာ အငျပွညျ့အားပွညျ့ ပါဝငျကစားနိုငျမှာပါ။
-အာဆငျနယျအသငျးဟာ အမှတျပေးပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ လကျရှိခနျြပီယံနဲ့ အဖှငျ့ပှဲကစားရတာက ၁၉၇၀-၇၁ ရာသီနောကျပိုငျး ပထမဆုံးအကွိမျဖွဈပါတယျ။ ၁၉၇၀-၇၁ ရာသီက အဲဗာတနျနဲ့ကစားခဲ့ရပွီး (၂)ဂိုးစီ သရကေခြဲ့တယျ။
-မနျစီးတီးအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျရာသီအဖှငျ့ နောကျဆုံး(၉)ပှဲမှာ ရှုံးပှဲလုံးဝမရှိဘဲ (၈)ပှဲနိုငျ၊ (၁)ပှဲသရကေခြဲ့ပွီး အဲဒီ(၉)ပှဲမှာ (၇)ပှဲဆကျ သရကေခြဲ့တယျ။
-အာဆငျနယျအသငျးဟာ မနျစီးတီးနဲ့ နောကျဆုံးပရီးမီးယားလိဂျ(၅)ပှဲမှာ နိုငျပှဲမရှိဘဲ (၂)ပှဲသရေ၊ (၃)ပှဲ ရှုံးခဲ့သလို နောကျဆုံး(၁၂)ပှဲမှာလညျး (၂)ပှဲသာ အနိုငျရခဲ့တယျ။
-အီမရိတျဈကှငျး နောကျဆုံးလိဂျ(၆)ပှဲမှာလညျး (၁)ပှဲသာနိုငျခဲ့ပွီး (၂)ပှဲသရေ၊ (၃)ပှဲရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။
-ပရီးမီးယားလိဂျလကျရှိခနျြပီယံအသငျးတှေ ပွီးခဲ့တဲ့ (၂)ရာသီဆကျ ရာသီအဖှငျ့ပှဲမှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး အင်ျဂလိပျဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျမှာ လကျရှိခနျြပီယံအသငျး အဖှငျ့ပှဲ (၃)ရာသီဆကျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာ တဈခါမှ မရှိခဲ့ဘူး။
-အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျအဖှငျ့ပှဲကို အိမျကှငျး (၇)ရာသီဆကျ ကစားခှငျ့ရခဲ့တာဖွဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့(၆)ပှဲမှာ (၂)ပှဲနိုငျ၊ (၁)ပှဲသရေ၊ (၃)ပှဲရှုံးခဲ့တယျ။
-အာဆငျနယျအသငျးဟာ တနင်ျဂနှနေေ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲတှမှော အနီကတျ(၆)ကွိမျအထိ ပွသခံခဲ့ရပွီး အမြားဆုံးဖွဈနတေယျ။
-ဂှါဒီယိုလာနဲ့ အူနိုငျးအမျမရီတို့ဟာ စပိနျမွမှော စုစုပေါငျး(၁၀)ပှဲဆုံတှခေဲ့ပွီး ဂှါဒီယိုလာက တဈပှဲမှ မရှုံးဘဲ (၆)ပှဲနိုငျ (၄)ပှဲသရကေခြဲ့တယျ။